Maah maah soomaaliyeed baa tidhaahda:rag gar baa kala saarta dumarna jaan...by maxamed jeex. | Awdalmedia.com
Maah maah soomaaliyeed baa tidhaahda:rag gar baa kala saarta dumarna jaan...by maxamed jeex.
Salaadiinta ugu tunka weyne gobolada Awdal,salal & galbeedka gabiley ee beelaha Maxamed-case oo hambalyo & bogaadin ugu tegey madaxweynaha cusub iyo madaxwayne kuxigeenka.
kulankii shaley dhaxmarey MDW cusub JSL mudane Muuse Biixi Cabdi , madaxawayne kuxigeenka Eng C/raxmaan C/laahi ismaaciil saylici iyo beelaha Maxamed- case oo ahaa runtii mid ku bilawday jawi aad u wanaagsan kuna dhamaaday jawi ay ku jirto farxad & is afgarashô iyo is qadarin .
Beelaha maxamed -case oo ah kuwa ugu dhulka balaadhan galbeedlka somaliland ,uguna dadka badanle ayaa waxay u sheegeen madaxweynaha cusub iyo kuxigeenka inuu ilaaliyaan dadkii codka siiyey ,iyaga oo dhawraaya dhamaan cadaalada dalka JSL...
beelaha maxamed-case waxay ku yidhaahdeen madaxweynaha cusub mudane muuse biixi cabdi beertii aad labaatan jirka aad ku beerato lixdan jirkaad ku nasataa ,markaa dalkan adoo dhalinyaro ah ayaad u soo halgantey maantana waadigaa noqday hogaankii ugu sareeyey qarankan somaliland ee hurdinka ah.
Hadaan nunahay beelaha maxamed-case ee idinsiiyay in kabadan afartan kun oo cod 40 000 waxaa ay idinka sugeynaa wada shaqeyn wanaagsan oo aad siiso dadkii codka intaa leeg xisbiga siiyey mudane madaxweyne iyo madaxwayne ku xigeen.
Beelaha maxamed-case waxay ku soo gaba gabeyeen maah maahda ah hootoy caano malihida cidda ayaan lagaabadin.
Madaxweynaha cusub hadaladiisii waxaa kamid ahaa inuu ku faraxsan yahay kulankan uu la kulmey beèlaha maxamed-case uu kana garaabaayo wax badan oo halkan ay ka dhawaajiyeen salaadiintu uuna ogyahay sida wanaagsan ee beelaha maxamed- case ay isku garabtageen xisbiga kulmiye ,maal badan & cod badana ay gashadeen xisbiga ,waanan soo dhaweynayaa dhamaan hadaladiina wanaagsan ee halkan aad ka soo jeediseen.
Sidoo kale madaxwayne ku xigeenka jamhuuriyada somaliland Eng C/raxmaan C/laahi ismaaciil saylici ayaa dhankiisa soo dhaweeyay kulankan.
Guntii & gaba gabadii madaxweynaha cusubi wuxuu yidhi dhamaan umada reer somaliland waxay iga fishaaba waa cadaalad inaan u sameeyo dhamaan gobolada reer somaliland iyo bulshadeeda.